अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा रहेकी बहिनीलाई दाइको मन छुने पत्र ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा रहेकी बहिनीलाई दाइको मन छुने पत्र !
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ कार्तिक २०७७, आईतवार ११:५६ |
दाइको तर्फबाट तिमीलाई न्यानो माया अनि सम्झना। सधै स्वस्थ रहु भनि सधै भगवानसंग कामना गरि बसेको छु।
थाहा छ तिमीलाई ? तिमी सानी हुँदा खेल्दा खेल्दै कहिलेकाहीं जब तिमी खाटबाट लड्थ्यौ नि, तिमी रुनुभन्दा पहिले म रोइसक्थें। अहिले तिमीबाट यति टाढा रहनु परेको छ। तिमीलाई ठेस लागेको थाहा पाउन म साथमा छैन। जब नेपालमा कोही केटी माथि भएका हिंसा, बलात्कारका घटनाका समाचार आउँछन् नि, मेरो मुटु डरले भरिन्छ।
नानी ! मैले बुझेको छु, तिमी अब ठूली भयौ। आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्छ्यौ। तिमी आत्मनिर्भर बनेकी छौ। तर दाइको मन न हो, म त तिमीले एक पटक फोन उठाएनौ भने पनि झस्किन्छु। जब तिमीले फोन उठाउँछ्यौ नि, मेरो ओठमा आफै मुस्कान आउँछ। तर यो माया देखाउनको लागि म रक्षा बन्धन, तिहारमा पनि तिमीसंगै हुन पाउँदिन।
ठूलो हुनु भनेको दु:ख बढ्नु रै’छ नानी। आफ्नो भन्नेसंग छुट्टिनु रै’छ। मनमा व्यथा लुकाएर बाँच्न सिक्नु रै’छ। सधै बच्चा नै रहेर खेल्न पाए कति जाति हुन्थ्यो होला है ! मैले तिमीलाई अझै कति सताउने थिएँ होला ! अझै कति तिमीसंग लुकामारी खेल्थें होला। हेर त अहिले त जिन्दगीसंगको लुकामारी खेल्दा खेल्दै कति टाढा आइपुगें।
कहिलेकाहीं त तिमीले नभेटे पनि म यो लुकामारी हारेरै भएपनि तिमी अगाडी उभिउँ जस्तो लाग्छ। तर मलाई थाहा छ, तिमी मलाई हारेको हेर्न सक्दिनौ। त्यसैले त हरेक तिहारमा आँशु लुकाएर भिडियो कलमा मुस्कुराइरहेकी हुन्छ्यौ।
नानी ! तिम्रो दाइलाई देखेर नै तिमीले विदेशी जीवन बारे थाहा पाइसकेकी छौ। विदेशको मोहमा नपर्नु। मैले विदेश कहिल्यै नआउनु भनेको होइन। तर राम्ररी सोंच विचार गरेर मात्र आउनु। आफू जीवनमा के बन्न चाहन्छु र के गर्न चाहन्छु भन्ने जानेर आउनु। पैसा र महँगो जीवनशैलीप्रति आकर्षित भएर आफ्नो जीवन नअल्झाउनु।
सोंचे जस्तो भएमा तिम्रो दाइ तिहारको समय पारेर घर आउनेछ। तिमी छौ र त म आमा-बुवा एक्लो हुनुहुन्न भन्ने ढुक्क छु। तिमीले घर हेरेकी छौ र त मैले यहाँको काम र पढाइमा ध्यान दिने मौका पाएको छु। धेरै माया मेरी कुशल, जीम्मेवार र मायालु बहिनीलाई।
Previousट्वेलेट क्लिनर खाँदा दुई वर्षिया बालिकाको मृत्यु
Nextतिहारको लागि घरमै यसरी बनाउनुहोस् भाइमसला
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १०:०३